चितवनसहित देशभरका नर्स आन्दोलित, ‘स्वयंसेवी र श्रम शोषणबाट मुक्त गराऊ’ | चितवन पोष्ट
गृह » चितवनसहित देशभरका नर्स आन्दोलित, ‘स्वयंसेवी र श्रम शोषणबाट मुक्त गराऊ’
भरतपुर । सेतो पोशाकमा सजिएर रातदिन नभनी, लाजघीन नमानी बिरामीहरुको सेवा गर्ने नर्सहरु भित्रभित्रै आँशुमा डुबिरहेका छन् । बाहिर हेर्दा जोकोहीलाई लाग्छ, नर्सको जीवन सुन्दर छ । तर, वास्तवमा गहिराइमा पुग्ने हो भने नर्सको जीवन बाहिर हेर्दाजस्तो सुन्दर छैन ।
देशभरका नर्सहरु आफ्नो सेवा सुविधालाई लिएर यतिबेला आन्दोलित छन् । विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै आन्दोलित भएका नर्सहरुको जीवनकथा अत्यन्तै दयनीय देखिएको छ । चितवनजस्तो जिल्लामा पनि कति नर्सहरु महिनौ दिनसम्म स्वयंसेवीको रुपमा काम गर्न बाध्य छन् । कति नर्सहरु मासिक ६÷८ हजारमा पनि काम गरिरहेका छन् । कस्तो बिडम्बना ! पीसीएल नर्सिङ पढ्न ८ लाखले पुग्दैन होला, तर मासिक ८ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् नर्सहरु ।
नेपाल नर्सिङ संघको निर्देशनअनुसार चितवन नर्सिङ संघ पनि शनिबार आफ्नो सेवा सुविधाको माग गर्दै सडकमा उत्रियो । चितवनका नर्सहरु सेतो एप्रोनमा सडकमा निस्के र आफ्नो हकहितको नारा लगाए । ‘नर्सहरुको श्रम शोषण भइरहेको छ, कति नाम चलेका चितवनका अस्पतालहरुले स्वयंसेवीको रुपमा नर्सहरुलाई दलाइरहेका छन् । यसको निराकरणका लागि चितवनका नर्सहरु आन्दोलित हुनुपरेको हो’ चितवन नर्सिङ संघकी अध्यक्ष माया पाण्डेले भनिन् । चितवनकै नाम चलेका अस्पतालहरुले ६ हजारसम्ममा नर्सहरुलाई काममा पेलिरहेका उनले आरोप लगाइन् ।
नर्सहरु राज्यप्रति बढी आक्रोश पोखेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अधिकारसहितको नर्सिङ महाशाखा गठनको गर्न नर्सहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । ‘नर्सहरुको जीवन बाहिर देखेजस्तो छैन, उनीहरु रातदिन काममा जोतिन्छन् । भनेजति बिदा पाउँदैनन् । अस्पतालका सञ्चालकहरुको मनोमानी छ । उनीहरुले चाहेको बेला खाली हात लिएर नर्सहरुलाई जागिरबाट अवकाश दिन्छन्’ चितवन मेडिकल कलेजका सहप्राध्यापक राजकुमार मेहताले भने ।
अस्पतालहरुले बिरामी जाँचको हरेक शुल्क बढाइरहेका हुन्छन् । अप्रेसन शुल्कहरु पनि बढिरहेकै छ । तर, नर्सको तलब वृद्धि हुन सकेको छैन । ‘भरतपुरमा एउटा सामान्य कोठाको भाडा अहिले ३ देखि ४ हजार पर्छ । बिहान बेलुका खाना र दिउँसको खाजामा कम्तीमा ५ हजार खर्च हुन्छ । अनि ८÷१० हजार तलब खाएर नर्सहरुको जीवन कसरी धानिन्छ ?’ नर्स विष्णु विष्टले भनिन्, ‘भरतपुरमा एकजना कोठा भाडा लिएर पालिन कम्तीमा २० हजार चाहिन्छ । यस्तो महँगीमा नर्सहरु कसरी बाँच्न सक्छन् ?
चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता जरुरी